Kedu ihe bụ na etu o si dị mkpa ecomobility | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Mmetọ a na-arịwanye elu n’obodo ukwu na mmetụta dị egwu nke mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa, na-amanye obodo ime ka njem ha ghara ịbụ ihe na-emerụ gburugburu ebe obibi. Imirikiti ebe ndị na-emetọ ikuku anwuru na obodo sitere na njem. Ebe ọtụtụ nde ugbo ala na-agbasa mgbe niile, nsonaazụ nke ụmụ amaala na gburugburu ebe obibi dị oke njọ.
Iji belata nsogbu ndị a, ecomobility na-ebili. Ọ bụ ihe na-adigide agagharị agagharị na obodo iji belata mmetụta na gburugburu ebe njem. Youchọrọ ịma ihe ecomobility mejupụtara yana njirimara ndị ọ nwere?
1 Gịnị bụ ecomobility?
2 Mkpa ecomobility
3 Ngwọta ndị na-ekwu maka agagharị agagharị
4 Sertrans na ecomobility
Gịnị bụ ecomobility?
Dịka e kwuru na mbụ, ecomobility na-esite na mkpa iwebata echiche nke usoro ọmụmụ na njem. Mbugharị obodo na-adabere n'ụdị mmanụ a na-eji, netwọkụ okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ ịnyịnya igwe, ikike njem ọhaneze, wdg. Ya mere, ọ dị mkpa itinye usoro iji belata mmetọ.
Enwee ike gụnyere usoro mgbasa ozi ndị ahụ nke na-eduga ndị mmadụ na ihe site n'otu ebe ruo ebe ọzọ, na-echekwa ma na-echebe ọdịdị na gburugburu ebe obibi. Nke a na-akwalite ahụ ike na-enyere anyị aka ịga n'ihu n'ọdịnihu dị ezigbo anya na-ebelata mmetọ na-aga n'ihu. Echiche nke mmepe na-adigide na-abanyekwa na ecomobility. Ọ dị mkpa na na njem anyị nwere ike igbo mkpa ugbu a na-enweghị imebi ọgbọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu iji zute nke ha.
Enweghi ike inweta ego n’enye aka dika ogha n’iru. O nwere ike ọ bụghị oge mbụ ị nụrụ ya. Agbanyeghị, ọ na-enwekarị mgbagwoju anya na mmemme dịka na-eje ije, na-eji ụgbọ njem ọha ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè. Ọ bụ eziokwu na ihe atọ ndị a na-enyere aka belata mmetọ ahụ ma na-agagharị agagharị. Mana ecomobility abụghị naanị nke a. Ọ bụ ngwakọta nke ụzọ njem na-emetọ emetọ yana netwọkụ okporo ụzọ nke na-eme ka ịgafe.
Transportgbọ njem obodo na-akwagide bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ izere ịnwụchu ọnwụ site na mmetọ. A na-ekwu na mmetọ ikuku bụ onye ọrụ nkịtị nke na-ahụ maka igbu mmadụ. Ihe bụ ihe ọzọ, na-eme ka ụkwara ume ọkụ, ihe nfụkasị ahụ na-aka njọ na nsogbu iku ume na obi. Maka nke a, ụgbọ njem anyị ga-abụrịrị ihe obibi ụlọ.
Kwa ụbọchị ecomobility na-abawanye na ọha mmadụ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ka ndị mmadụ si akpọ aha ha ma ọ bụ akụkụ nke okwu ndị a na-ahụkarị. Nzọụkwụ obibi obibi nke ụgbọ njem anyị hapụrụ na-abawanye kwa afọ. Na ọkwa nke mmadụ ọ pụtaghị ihe ọ bụla, mana enwere ọtụtụ n'ime anyị n'ụwa niile.
Ojiji nke ugbo ala na ugbo ala ndi ozo choro mmanu ojoo bu otutu oge. Vehiclegbọ ala nke ọ bụla na-ebunye tọn CO2 n'ọtụtụ ikuku kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, anyi aghaghi iburu n'uche ibupu ngwa ahia. Agbanyeghị na ejikọtara ya na akụ na ụba na uto (site na ịmepụta ọrụ), ọ bụ mpaghara na-emetọ emetọ. Ọ dị na ngalaba njem ndị a ebe ọ dị mkpa iji mejuputa omume ndị na-enyere aka ịme ihe.
Ihe dị mkpa nke ecomobility dị mkpa iji melite ogo ikuku na ahụike na obodo. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% nke ikuku gas na-emetọ n'obodo ukwu sitere na njem azụmahịa.
N'adịghị ka echiche, ojiji nke ugbo ala na-emetọ ọ bụghị naanị na-emetụta gburugburu ma ọ bụ ahụike, kamakwa akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke a bụ n'ihi mmụba nke ọnụọgụ ihe mberede, ahaghị nha na oke asọmpi n'ihi oke nke ugbo ala na-agbagharị.
Ngwọta ndị na-ekwu maka agagharị agagharị
Mbugharị na-adịgide adịgide abụghị naanị ịgba ịnyịnya ígwè, ịnya bọs ma ọ bụ ịgagharị. Ọ bụ maka ịtụpụta azịza dị iche iche iji mee ka ọ na-adịgide adịgide. Yabụ na ị nwere ike ịhụ otu ihe atụ, na ọgbakọ omebe iwu kwuru na n'okporo ámá dị obosara nke dị mita 3,5, mmadụ 2.000 nwere ike ịgafe ụgbọ ala na 1 awa. Ọ bụrụ na ha bụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, 14.000; ndị ji ụkwụ aga, 19.000; site ụgbọ okporo ígwè, 22.000 na n'ụgbọ ala, 43.000. Na ọtụtụ ndị ọzọ site na metro, nke na-emetọ obere ụgbọ ala.
Ọ bụghị okwu banyere ịhọrọ njem zuru oke, kama ọ bụ ịtụle ọnụọgụ ndị mmadụ nwere ike ịga otu okporo ụzọ. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ụgbọ nwere ike ibikọ ọtụtụ mmadụ, anyị ga-ebelata mmetọ dị ukwuu.
Fọdụ n'ime omume ndị ecomobility rụrụ bụ:
Jiri igwe igwe ndi obodo no otutu obodo.
Na-ebute ụgbọ njem ọha na eze ụzọ karịa nkeonwe.
Mee ka ndị na-agafe agafe.
Machibido ntinye ụgbọ ala n'akụkụ ụfọdụ nke obodo.
Bụrụ na ị na-eji ụgbọ ala, mee ya na ohere kachasị.
Ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche na mbugharị njem bụ nhazi nke ụzọ. A ga-ahụrịrị ọdụ ụgbọ mmiri ahụ n'ụzọ dị otú ahụ ebe dị anya iji gaa njem na mgbochi okporo ụzọ dị ntakịrị. A nwapụtara na okporo ụzọ na-emetọ ihe karịa okporo ụzọ.
N'aka nke ọzọ, a na-ahụ iwebata ụgbọ ala nke mmanụ ya na-anaghị emetọ ma na-ewepụsị ikuku efu dị ka ihe dị ezigbo mkpa. Anyị na-ekwu maka ugbo ala eletrik. Ọ bụrụ na mmepụta ọkụ eletrik sitere na mmanụ ala, ọ ga-emerụ ihe okike ya, mana ọ gaghị eji ya eme ihe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ike ume sitere na mmeghari ohuru, ụgbọ ahụ ga-enwe ikuku efu.
Sertrans na ecomobility
Dị ka e kwuru na mbụ, njem site na njem na-akpata 40% nke nsị na-emetọ obodo. Maka nke a, Sertrans ejirila ọtụtụ afọ tinye ego na njem na-adigide maka ngwaahịa. N'ime afọ ndị a, ọ nọ na-arụ ọrụ nke na-ebelata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ọrụ ya.
Otu n'ime ha bụ atụmatụ ziri ezi nke ụzọ gasị. Iji belata oge njem, Sertrans na-ezube ụzọ kachasị nso na ajụjụ ọ bụghị naanị na kilomita, kama na nsị CO2. Ndị ọkwọ ụgbọ ala na-etinye teknụzụ ọhụrụ na iji mmezi nke ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ na-enye. N’ụzọ dị otu a, a na-ebelata ụzọ njem.
Ihe ọzọ bụ njikarịcha nke ibu. Cksgbọ njem ndị buru ibu buru ibu ma nwee ike iburu ibu karịa otu oge. Na nke a, ọnụ ọgụgụ nke njem nwere ike belata na nso ka ebumnobi nkwado.
N'ikpeazụ, Sertrans modgbọ njem ndị ọzọ amụbawo. Ọ bụ ngwakọta nke njem ala na ụdị njem ndị ọzọ iji metọọ obere.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ecomobility dị ezigbo mkpa taa ma ọ bụghị naanị na iji ụgbọ njem ọha na ịnyịnya ígwè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Kedu ihe bụ ecomobility na otu ọ dịruru mkpa?
Ike ohuru ohuru na Spain